Asia Travel - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuhamba (Ikhasi 2)
Lo nyaka omubi ka-2020 uyaphela. Manje sesingaqala ukuba nethemba lokuthi sizoshiya ubhadane emuva futhi ...
Indawo: i-United Arab Emirates
Isikhathi esithile manje, eMpumalanga Ephakathi, sekuvelile amandla omcebo wabo omkhulu uvela egolide lethu ...
IVladivostok yidolobha laseRussia eliseduze kakhulu nomngcele weChina neNyakatho Korea. Kuyinto…
Sikutshela ongakubona nokwenzayo edolobheni laseNdiya iBenares, elibhekwa njengedolobha elingcwele.
Uhambo oluya ezintabeni zase-Ural
Izintaba ze-Ural zibhekwa njengomngcele wemvelo phakathi kweYurophu ne-Asia. Yizintaba ezinhle ezigijimayo ...
Umhlaba mkhulu futhi uma uhlela uhambo, singathanda ukuba nesikhathi nemali ...
Ungagqoka kanjani eJordani
Uthathe isinqumo sokuya eJordani lapho isimo sempilo sesibuyela kwesijwayelekile. Ufunda ngezindawo ezivakashelwa, ukudla, i-visa, ezokuhamba nokuningi ...
I-China namuhla ingelinye lamazwe athakazelisa kakhulu emhlabeni. Hhayi ukuthi bekungakabikho ngaphambili, kepha ngesikhathi ...
Uzoya nini eThailand
I-Thailand ingenye yezindawo ezithandwayo zabahambi lapho behlela iholide laseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Kuthathwa njenge ...
Yini ongayibona eMongolia
EMongolia. Igama kuphela elisisa ngokushesha emazweni akude futhi angaqondakali, ngentelezi yeminyaka eyizinkulungwane. Izwe elikhulu, ngaphandle ...
Yini ongayibona eSouth Korea
Isikhathi esithile manje, iNingizimu Korea isezindebeni zezigidi zabantu emhlabeni wonke ...
Oymyakon, lapho kubusa khona amakhaza
Ungayicabanga indawo lapho amakhaza eyeqisa ngempela? Cha, akuyona i-Arctic noma i-Antarctic. Imayelana…
Uhambo oluya echibini iBaikal
Ichibi elikhulu kunawo wonke lamanzi angenasawoti emhlabeni, ngevolumu, yiLake Bailkal. Iqukethe amanzi amaningi kune ...
I-Uzbekistan, indawo e-Asia
Umhlaba mkhulu futhi kunezindawo eziningi kakhulu ongazivakashela ... Uma sishiya iMelika, iYurophu nokwaziwa kakhulu ...
Yini ongayivakashela ePhilippines
IPhilippines iyindawo enhle yokuvakasha. Inezindawo eziningi ezithakazelisayo futhi yingakho idinga uhambo oluhluke ngokuphelele ...
I-Oman, indawo engavamile
Ucabangani ngokuthatha uhambo oluya e-Oman? Kungahle kungabi sohlwini lwezindawo ezivakashelwa kakhulu ...
IColombo eSri Lanka
Yaziwa ngokuthi "isiqhingi samagama ayinkulungwane" ngoba kuwo wonke umlando saziwa ngabaningi ...
Yini ongayibona eMalaysia
INingizimu-mpumalanga ye-Asia kuthiwa iyikhaya lamabhishi neziqhingi ezihamba phambili emhlabeni. Kuyindawo lapho ...
Yini ongayibona eSaint Petersburg
Kwabaningi, iSt. Petersburg ukuphela kwesizathu abavakashela noma ukuvakashela eRussia. Ngokomlando futhi muhle ngokwedlulele, lokhu ...
Ikhadi leposi laseHalong Bay, eVietnam
IHalong Bay iseVietnam, enye yezindawo ezithandwa kakhulu eSoutheast Asia. Indawo ye-Backpacker kanye ...
Hue, indawo eVietnam
Enye yezindawo ezinhle kakhulu eVietnam yiHue, idolobha lasendulo elake laba inhlokodolobha yezwe ...
Yini ongayibona eSri Lanka
Ekhethwe njengendawo yezinkanyezi ka-2019 ngummemezeli odumile wezohambo weLonely Planet, iSri Lanka ingenye ye ...
INew Delhi ibonakaliswa ngokuba yidolobha lokuqhathanisa. Kepha, ngaphezu kwakho konke, ngokuba nezikhumbuzo ezinhle kanye ne-gastronomy emnandi.
Thola ongakubona e-Aqaba, Jordan
Sikutshela konke okungabonwa nokwenziwe edolobheni lase-Aqaba eJordani, okuwukuphela kwalo elikwazi ukufinyelela olwandle.
I-gastronomy yaseJapane ingenye yezintandokazi zami. Angizithandi izinto ezimbalwa kakhulu futhi ngikhuthaza wonke umuntu o ...
Yini ongayibona eChina
Ukuba izwe lesithathu ngobukhulu emhlabeni, ngezikhala zemvelo ezimangalisayo, isiko lasendulo nemizi ...
ICambodia ingumbuso oseNingizimu-mpumalanga ye-Asia futhi enye yamaparele ezokuvakasha azungeze lapha, kanye ne ...
IJapan inamasiko amaningi, kepha ngokwesikhathi sonyaka kwenzeka kimi ukuthi isikhathi esihle sokuthi ...
Yini ongayibona eNdiya
I-India izwe elingenakuchazwa ngamagama futhi akushiyi ungenandaba. Kuyadingeka ukuthi uhambe lapho ...
Ithempeli Eligolide, eNdiya
I-India iyindawo emangalisayo. Akubona bonke abantu, yize abaningi bethi uhambo oluya eNdiya luguqula impilo….
Yini ongayibona e-Ulaanbaatar
Inhlokodolobha yaseMongolia, i-Ulaanbaatar, kungenzeka ingabi sohlwini lwezindawo zamaphupho zabaningi ...
I-Thailand inezindawo eziningi ezinhle zemvelo. Uma kukhulunywa ngemvelo, iThailand ngokungangabazeki iyipharadesi eningizimu-mpumalanga ...
Yini ongayibona eShanghai
Olunye lohambo oluthakazelisa kakhulu esingalwenza e-Asia ukuvakashela eChina kunikezwe umehluko phakathi ...
Lapho sicabanga ngepharadesi imvamisa sicabanga ngendawo ekude, exotic, enamabhishi epharadesi anesihlabathi esimhlophe namanzi ...
Izintelezi ze-Hpa-an, eMyanmar
ENingizimu-mpumalanga ye-Asia uzibuthe wabaphakeli, abathandi bokunethezeka base-Asia namathafa amahle. Kepha kungani njalo ...
UHoi An, iparele laseVietnam
IVietnam yizwe lobuhle obungajwayelekile nobungokwemvelo amasiko alo ahlala ethakazelisa futhi lapho kuncane futhi ...
Yini ongayibona eMaafushi eMaldives
Sikutshela ongakubona nokwenzayo esiqhingini saseMaafushi endaweni yaseMaldives, indawo evakashayo kakhulu enamabhishi amahle.
Amathempeli avusa inkanuko eKhauraura, eNdiya
I-India inakho konke kusuka emabhishi amakhulu, emadolobheni amahle namathafa amahle kuya emathempelini nasezindaweni ezingcwele ...
Ithempeli legolide eNdiya
E-labyrinth yemigwaqo nasesiqhingini esiphakathi kwechibi elincane sithola ithempeli legolide le ...
UNinh Binh, ipharadesi eVietnam
Yonke i-Southeast Asia ingumzila wamakhadikhadi angasoze alibaleka, womabili amazwe awo aluhlaza kanye namagugu awo amasiko….
I-Asia iyindawo emangalisayo yokuvakasha. It has konke, umlando, namathafa, isiko, inkolo ... uhambo kunoma iyiphi ikhona ...
Enye yezindawo eziyivelakancane emhlabeni uLwandle Olufile. Kufanele ukuthi wezwa ngaye futhi ...
Vakashela iNtaba iFuji
Uphawu lweJapan yiNtaba iFuji. Noma yimuphi umlandeli wamanga, i-anime noma i-cinema yaseJapan uyazi ...
E-Esplanade of the Mosque of Jerusalem kukhona iDome of the Rock, ithempeli elingcwele lamaSulumane elithola ...
Amathempeli ase-Angkor, amangala eCambodia
Okunye kokuhehayo okuthandwa kakhulu futhi okuhle eCambodia ngamathempeli e-Angkor, okuyinkimbinkimbi yamatshe ecishe yagwinywa yihlathi lemvula.Uma uthatha uhambo oluya eCambodia awukwazi ukuphuthelwa ngamathempeli e-Angkor, amahle noma mahle kakhulu kunamaPiramidi! Ye-Egipt!
Iplanethi yethu inomlando omude futhi ohlukahlukene futhi yize sikholelwa ukuthi indalo iyaqhubeka, iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi asizazi nezidimoni zaseKomodo? Izilwane ezinwabuzelayo ezinkulu ezihlala eziqhingini zase-Indonesia. Isayithi lihle uma uthanda imvelo.
Sekuyisikhathi manje, mhlawumbe iminyaka eyishumi manje, iNingizimu Korea ibisemephini yomhlaba yamasiko athandwayo. Kungani? Ngenxa yesitayela sakho somculo, ingabe uya eSouth Korea? Uqinisekile ukuthi uyayithanda idrama ne-k-pop kepha ngaphambi kokuthi ubeke unyawo lapho, ungathini ngokufunda okuthile ngamasiko aseKorea?
I-China izwe elikhulu ngokwendawo nangokwesiko. Ngaphakathi kwemingcele yayo kuhlala ngaphezu kwamashumi amahlanu ...
IJapane yindawo engiyithandayo kakhulu, ngingasho ukuthi indawo yami emhlabeni ngemuva kwezwe lami lokuzalwa. Ngiyayithanda iJapan, kangangoba ngiye eholidini kulezi ezintathu zokugcina. Ngabe uya eJapan? Ngemuva kwalokho thola ngamasiko abaluleke kakhulu aseJapan ukwazi ukuthi ungasabela kanjani kuwo. Futhi yiziphi ongeke uzenze!
Vakashela amabhishi amahle kakhulu eThailand
Thola ukuthi yimaphi amabhishi amahle kakhulu eThailand okungafanele ukuthi uphuthelwe ohambweni lwakho oluya kuleli lizwe elihle, kusuka kwamatasa kakhulu kuya kulolo olungakonakali.
Thola ubuhle beMekong Delta
Olunye lwamaparele ezivakashi eVietnam yiMekong Delta, kepha kufanele yini ukuvakashelwa noma kukhuliswe ngokweqile? Lapha imininingwane, amathiphu nezinye izindawo.
Imigomo yokuya eThailand
Ngabe uya eThailand? Ngemuva kwalokho kufanele wazi konke ngemigomo oyidingayo ukuya eThailand futhi ungaguli.
Isiko laseJapan, liyathandeka njengoba likhethekile
Isiko laseJapan liyamangaza ngokumangazayo futhi akekho noyedwa ongakunaki lapho ethatha isinqumo sokuvakashela izwe. Ngabe unesibindi sokukhothama, ukhumule izicathulo zakho futhi uphile isiko le-otaku?
I-Wadi Rum, ukuvakashela ehlane laseJordania
Ugwadule lwaseWadi Rum luseJordani futhi lungesinye sezindawo zalo eziheha izivakashi ngemuva kwePetra, ugwadule lokwenza imisebenzi eminingi.
Amathempeli amahle ase-Ayutthaya
IThailand iyamangalisa yingakho uma uthanda isiko, qiniseka ukuthi uvakashela amanxiwa e-Ayuttahaya, eduze kakhulu neBangkok. Izigodlo, amathempeli, izithombe zikaBuddha.
Japan Rail Pass, Japan ezandleni zakho
Ukuzungeza iJapane kulula ngeJapan Rail Pass. Unganqikazi! Izitimela, amabhasi, izikebhe, konke okuzayo nokudlula kuleli zwe elihle.
Ngabe ufuna ukubona umhlaba othakathayo eChina? Ama-Entocnes aya eSichuan futhi avakashela eHuanglong, amachibi amibalabala, iziphethu ezishisayo, amahlathi, ama-pandas, amathempeli
ISapporo, enyakatho ekude yeJapan
INyakatho yeJapane ayivamile ukuhanjwa kodwa yinhle kakhulu. ISapporo ikulindele ngezintaba zayo, izithombe zayo eziqoshiwe zeqhwa, amahlathi ayo kanye nezinkundla zayo ze-lavender.
IKanazawa, nenhle yaseJapan yangezikhathi zasendulo
Ukuze wazi iJapan yebo noma yebo kufanele uvakashele eKanazawa, idolobha elinayo yonke intelezi yaseJapan yasendulo. Inqaba, ithempeli, ama-ninjas, ama-samurais.
Ukwakhiwa Kwe-Mega Okumangalisayo E-China
Ukunambitheka kwezakhiwo ze-mega eChina kuyaziwa. Hhayi kuphela ngoba ivumela ukuthi bafundise amandla ...
5 izigodlo ezingasoze zalibaleka eSt
Alukho uhambo oluya eRussia ngaphandle kweSt. Futhi akukho ukuvakashelwa eSt. Petersburg ngaphandle kokuvakasha kwezigodlo zayo ezinhle kakhulu. Thatha umgomo!
Impilo yasebusuku eDoha, yabesilisa nabesifazane
IDoha, inhlokodolobha yaseQatar, inezimpilo eziningi zasebusuku ngakho-ke uma uthatha uhambo, ungangabazi ukugqoka izingubo ezinhle zokuphuma ezindaweni zokucima ukoma nokudansa.
Izindawo ezihamba phambili zokuchitha uKhisimusi e-Asia
Akukho okufana nekhoneni lase-Asia lokuchitha uKhisimusi, kepha izindawo ezinhle kakhulu yiNingizimu Korea, China neJapan. Ungaphuthelwa!
Setha inkambo yakho eSouth Korea ekulindele ngezandla ezimhlophe. Vele, ngaphambi kokufunda lo mhlahlandlela nalo lonke ulwazi oluhle kakhulu mayelana nalokho okufanele ukwazi.
ISingapore inepasipoti enhle kakhulu yokuhamba emhlabeni
Okunye ukukhathazeka kwabahambi ngamaholide abo aphesheya ukuthi ngabe bayayidinga i-visa yoku ...
Ulan Bator, ezokuvakasha ezikude
Umngani ungitshela ukuthi uthanda izindawo ezingaphandle futhi uyafa ukulahleka emigwaqweni yase-Ulan ...
Kungani ungatholi iSouth Korea eqala ngeSeoul? Idolobha lisesimanjemanje, linendawo yonke futhi linakho konke: isiko, umlando, ubuciko, umculo.
Xian, evakashela idolobha laseChina lama-terracotta warriors
AmaWarriors aseXian yiwona akhanga izivakashi kuleli dolobha laseChina elinabantu abangaphezu kwezigidi eziyisithupha ...
Izizathu zokuya eJapan nokuhlala
Lezi ezinye zezizathu zokuya eJapan futhi uhlale uphile. Asikholwa ukuthi kudingekile ukuthi sikunikeze okuningi ukuze uthathe uhambo. Ingabe ukulungele?
Yazi isiko lamaNdiya bese uthola amasiko abantu abangamaHindu ngokwenkolo, i-gastronomy, imikhosi nokunye okuningi kwesiko lamaHindu.
Thola isiko lase-Asia namasiko noma amasiko alo angajwayelekile e-Asia nakwamanye amazwe alo, uzomangala.
Vakashela amaCu Chi Tunnels, eVietnam
EVietnam awungeke uphuthelwe yiCu Chi Tunnels: komhlaba, omncane, omncane kanye nefa elikhulu lempi yaseVietnam.
IDurian sithathwa njengesithelo esinuka kakhulu emhlabeni, siyini iphunga laso elibi? Sikutshela zonke izimfihlo zalesi sithelo esinuka kabi.
Sichaza zonke izimfihlo zenselelo yokuhambela eMecca, indawo engcwele kunazo zonke enkolweni yamaSulumane futhi egcwele izimanga
Uma ungazi ukuthi ungafika kanjani eChina, landela lo mhlahlandlela lapho sikukhombisa khona izindlela ezihamba phambili zokufika eChibna: indiza, isitimela, umgwaqo ...
Amabhishi Ahamba Phambili Neziqhingi ZasePhilippines (Ingxenye 1)
Sikulethela ingxenye yokuqala lapho sichaza khona ukuthi yimaphi amabhishi neziqhingi ezinhle kakhulu ongeke uphuthelwe uma uya ePhilippines.
Umngcele woLwandle iMedithera ngakolunye uhlangothi nezintaba ngakolunye uhlangothi, iLebanon naphezu kwendawo yalo encane, ...
Konke odinga ukukwazi ukuya eTibet
Ingabe uyamthanda u-El Tibet? Ngemuva kwalokho hlela kahle uhambo lwakho futhi wazi konke mayelana ne-visa nezimvume ezikhethekile ozozidinga ukuya ophahleni lomhlaba.
Izizathu eziyi-7 zokubalekela ePhilippines exotic
IPhilippines iyizwe elihlukile. Hhayi ngokwendawo kuphela kepha nangokwesiko nangokomoya. Ngaphandle kokungenakuphikwa ...
Izinto okufanele wazi uma uhambela eJapan
Kulesi sihloko sikulethela izinto eziyi-10 okufanele wazi uma uhambela eJapane kungekudala: kusuka emasikweni wokuziphatha kuya ekugqokeni amasokisi amaningi.
IGreat Wall neTerracotta Army, ukuvakashelwa okubili okuhle eChina (II)
Lesi ngumbhalo wesibili omayelana neGreat Wall kanye neTerracotta Army, ukuvakashelwa okubili okuhle eChina (II). Siyakhuluma, kulokhu, ngamasosha.
IGreat Wall neTerracotta Army, ukuvakashelwa okubili okuhle eChina (I)
Lesi yindatshana yokuqala yamaphuzu amabili esizowanikela kuThe Great Wall yaseChina kanye naseTerracotta Army, ukuvakashelwa okubili okuhle eChina.
I-Chiang Mai, imbali yasenyakatho yeThailand
I-Chiang Mai, inhlokodolobha esenyakatho yeThailand, iwukubaleka okuqhamuka eBarngkok. Kuyaziwa ...
Elephant Nature Park, ukuvakasha kokuzithandela eThailand
Indlovu iwuphawu lukazwelonke lwaseThailand. Isilwane esimele amandla, ukuvikelwa kanye nokuhlakanipha. Kunjalo…
Izindawo zokungcebeleka ezintathu ezinconyiwe eMaldives
Ungathanda iholide epharadesi? IMaldives injalo futhi lapha sikushiya izinketho ezintathu zokungcebeleka ezinamanani amathathu ahlukene. Uyakhetha!
I-Oimiakón, idolobha elibanda kakhulu emhlabeni
I-Oimiakón, idolobha elibanda kakhulu emhlabeni, lapho izimoto kufanele zipakwe emagalaji ashubile ukuze uphethiloli ungabandi.
I-Ayurveda, eNdiya, isayensi yokuphila
Ngale ndatshana ehambayo sifuna ukwethula kumkhuba wasendulo waseNdiya: i-Ayurveda, noma yini efanayo, isayensi yokuphila.
Uhambo oluya e-Iran, lapho kuzalwa khona impucuko
I-Iran iyindawo yemilingo ngakho-ke uma uthanda i-adventure futhi uhambela izindawo ezihluke kakhulu, zenzele. Lapha unolwazi olusebenzayo lokukwenza.
Ungavakashela kanjani uPetra, umcebo waseJordani
Ukuvakashela iPetra kudinga isikhathi nokuhleleka ngoba kuningi ongakubona. Ngakho-ke, ukhomba imininingwane engcono kakhulu yokwazi lo mcebo waseJordani.
Ingabe uya eChina? Uyazi ukuthi kunezinto zokudla zakudala eziyisishiyagalombili kepha amakhulu ezinambitheka? Qiniseka ukuthi uzama ukudla okumnandi kwaseChina. Uzoncela iminwe yakho!
Sikukhombisa zonke izimfihlo zasenhlonhlweni yaseHindustan ukuze ukwazi ukuhlela uhambo lwamaphupho ngaphandle kokukhohlwa imininingwane kule ndawo eyingqayizivele
IBoracay akuyona ukuphela kwendawo okuhanjelwa kuyo ePhilippines, ngoba ukudilika nokutshuza ngonyawo ayikho enye ngaphandle kweCebu neziqhingi zayo.
I-Boracay, indawo ehamba phambili ePhilippines
Ngabe uyafuna amabhishi amahle ePhilippines? Bese uye eBoracay!
Enye yezikhumbuzo zakudala okwenziwa ngazo amaTusist ahambela eBali yimaski yendabuko lapho abadansi bezimboza ubuso babo lapho behumusha imidanso yabo nemidlalo yeshashalazi emibalabala futhi ihlukile.
Amathiphu wokuya eThailand: okufanele ukwenze nokuthi yini ongakwenzi
I-Thailand ithola izivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingama-26 ngonyaka ezihehwa ubuhle bamasimu ayo, umusa we ...
Sikufundisa wonke amaqhinga nezimfihlo ongazithenga eCambodia uthokozela kakhulu amathuba okuthenga kuleli zwe elihle
I-India: Amasiko nemikhosi
I-India izwe lamasiko, futhi imikhosi kanye namasiko ayo bekungeke kube kuncane. Kusuka kude kakhulu ...
I-India izwe lesibili emhlabeni ngokwesibalo sabantu, lifinyelela kubantu ababhalisiwe abayi-1,320.900.000. kwe…
E-Andaman Islands, maphakathi neBay of Bengal eningizimu yeBurma, isizwe samaSentinelese sesiphile iminyaka eyi-7.000, sigcina ubuqotho babo namasiko abo yize besemgqeni womunye wemizila yasendulo yezentengiselwano eyaziwayo .
I-China: Indima yabesifazane, izingubo ezijwayelekile nemidlalo yendabuko
Funda kancane ngemvelaphi yesiko lamaShayina lamanje: indima yabesifazane, izingubo ezijwayelekile neminye imidlalo yendabuko.
Qedela ukuhlanganiswa neziqhingi namabhishi amahle kakhulu eMalaysia ukuze uzilahlekele emabhishi asogwini omhlophe angakholeki.
ESpain nasezindaweni ezisizungezile, ukudla izinambuzane kubonakala kuwukudla kwangempela kithina. Kodwa iqiniso ukuthi…
Ngokuvame ukubizwa njengesimangaliso sesishiyagalombili somhlaba wasendulo, iPetra ingumcebo oyigugu kunayo yonke iJordani futhi…
Izinsuku zami ezintathu ngise-Osaka, umhlahlandlela wokuthi ungafika kanjani lapho nokuthi uvakashele ini
I-Osaka ayidina. Inenqaba, imisele, izitolo nempilo enhle yasebusuku!
Izikhangibavakashi Nemisebenzi eNdiya
Thola izindawo ezingcono kakhulu nemisebenzi ongayivakashela eNdiya, izindawo zemilingo nezikhangayo ezihlukile ozozikhumbula kuze kube phakade. Uyazi ukuthi iyiphi leyo?
Iyini inombolo yomlingo eChina futhi iyini incazelo yayo? Thola ukuthi kungani kunenombolo ekhethekile eChina futhi uzokwazi ukuthi ngabe iyinombolo yenhlanhla yini kuwe.
Umhlahlandlela kaHiroshima, izinsuku zami ezintathu ngisemzini webhomu le-athomu
IHiroshima idolobha lebhomu le-athomu futhi uma unezinsuku ezintathu awukwazi ukuliphuthelwa. Akunakulibaleka!
Umhlahlandlela wokuhamba waseJapan, ezokuthutha, ukudla, amanani, ukuthenga
Uyayithanda iJapan kepha ucabanga ukuthi kuyabiza kakhulu? Cha, iyatholakala futhi ikulindile, ngakho-ke bhala phansi lawa macebiso nolwazi ukuze ujabulele!
Ukufuna inkululeko? Ubunqunu e-Asia
Thola amabhishi amahle kakhulu ase-Asia ukushisa ilanga ngaphandle kwezingubo. I-Thailand, India noma i-Philippines ezinye zezindawo eziyizintandokazi, uzitholele!
Thola umfundaze wokuhamba emhlabeni
Thola umfundaze wokuhambela umhlaba futhi ujabulele lolo lwazi lomuntu siqu.
Mailuu Suu nokungcola
IMailuu Suu eKyrgyzstan ingenye yamadolobha angcoliswe kakhulu emhlabeni, kungani umoya ungcoliswe kangaka izakhamizi zawo ziphefumula?
IMirissa, indawo yokugcina imikhomo eSri Lanka
IMirissa yindawo edumile yabathandi bemikhomo, amahlengethwa namanye ama-cetaceans. Ukuheha izivakashi okunabalandeli abaningi ngokwengeziwe.
Kuze kube namuhla, imidwebo emihle yase-Asiriya isekhona okusivumela ukuba sazi laba bantu abadumile namasiko abo.
E-China, izinambuzane ziyadliwa futhi ziyisibiliboco sangempela. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iziphi izinambuzane eziphekayo futhi ezingaqala ukudliwa eYurophu?
I-Sago Gula Melaka, i-dessert kazwelonke yaseMalaysia
Uyazi ukuthi yini uphudingi ojwayelekile kakhulu waseMalaysia? I-Sago iyisici esivelele kunazo zonke kepha kukhona amaswidi amaningi okulungiselela i-dessert ekudleni kwakho.
U-Ella, ohamba phambili eSri Lanka (ingxenye I)
Itholakala esifundeni saseBadulla (esifundazweni sase-Uva) futhi ephakeme ngamamitha ayi-1050 ngaphezu kolwandle. Ixhunywe neColombo neKandy (amadolobha amakhulu ezwe)
Thola amazwe ase-Asia athola ukuvakashelwa okuningi minyaka yonke ngenxa yesiko lawo, imvelo noma umlando. Uyabazi bonke? Zitholele!
Ngabe ufuna ukunakekela izilwane zasendle eThailand?
Uma ufuna ukunakekela izilwane zasendle eThailand, sikutshela izinyathelo ezidingekayo zokuba yivolontiya futhi ngaleyo ndlela usize ukusinda kwalezi zilwane
Thola isiko lasePhilippines elibaluleke kakhulu: amasiko, ulimi nolunye ulwazi oluhlobene ne-gastronomy, inkolo nokunye okuningi.
Cedar, isihlahla sesizwe saseLebanon
Umsedari uwuphawu lukazwelonke lweLebanon, olubonakala efulethini lezwe futhi linezici eziningi nokusetshenziswa okwenza kube ngumuthi okhethekile.
Ithempeli laseToshogu: Indawo Engcwele Yezinkawu Ezi-3 Ezihlakaniphile
Vakashela iThempeli laseToshogu eJapan, elaziwa njengeSanctuary yezinkawu ezi-3 ezihlakaniphile ezamukela izigidi zabavakashi minyaka yonke. Yini eyenza ikhetheke kangaka?
Ubhiya ohamba phambili eNdiya
Uthanda ubhiya? Thola ukuthi iziphi izinyosi ezingcono kakhulu eNdiya, ezinokunambitheka okuyisici kanye nama-nuances ajwayelekile ezithako eNdiya
Yiziphi izitsha ezijwayelekile zasePhilippines? Sithola ukudla okuthanda kakhulu ePhilippines ukuze wazi ukuthi uzozama ini ohambweni lwakho.
Jatinga, lapho izinyoni zizibulala khona
Kungani izinyoni zizibulala eJatinga? Into engajwayelekile kakhulu ezokushiya ukhamisile, ephindaphindwa minyaka yonke ngokufa kwezinyoni ezingamakhulu
Indawo Engcwele Yeqiniso ePattaya
Sikufundisa zonke izimfihlo zeSanctuary of Truth ePattaya: inani lamakamelo, imvelaphi nefilosofi yaleli thempeli eliyingqayizivele emhlabeni.
Isimo sezulu eNepal
Thola ukuthi isimo sezulu saseNepal sinjani, ukuthi yiziphi izingubo okufanele uzigqoke kusizini ngayinye nokuthi yisiphi isikhathi esihle sonyaka sokuvakashela le ndawo egcwele izintaba
Izikhumbuzo ezijwayelekile zaseChina
Uhlela uhambo lwakho lwaseChina? Thola izikhumbuzo eziyisikhombisa ezijwayelekile kakhulu zamaShayina, isipho esihle sokumangaza abangane nomndeni wakho.
Okuhlangenwe nakho okuhlanu eJapane okungafanele ukuphuthe
Uma uthatha uhambo oluya eJapane, ngincoma ukuthi uphile lezi zimo ezinhlanu ongazilibaleki
Izindawo okungafanele uziphuthe eJordani
Sikukhombisa izindawo ezinhlanu okungafanele uziphuthe ohambweni oluya eJordani, phakathi kwazo okukhona iPetra noma uLwandle Olufile. Kepha kunezinye eziningi!
Ubuciko beCulinary eCambodia
Thola ukudla okujwayelekile kwaseCambodia bese ulungisa izindlela zokupheka ngeziphakamiso ze-gastronomic ozothola mayelana ne-gastronomy ejwayelekile yaseCambodia.
Imininingwane yokugubha Isonto Elingcwele 2016 eJerusalema
Imininingwane namanani okugubha iSonto Elingcwele eJerusalema
Iziqhingi namabhishi aseCambodia: IKep, Koh Tonsay neSihanoukville
Sikwembulela izimfihlo zeziqhingi namabhishi amahle kakhulu eCambodia: Kep, Koh Tonsay naseSihanoukville. Izindawo zasezulwini zokuzilahlekisela wena.
Thola iLuzon, isiqhingi esikhulu kunazo zonke ePhilippines esicasha izindawo eziningi zemilingo ongasithola: amabhishi, izintaba-mlilo, idolobha laso, izimakethe nokunye okuningi.
Sithola izindawo ezifanekisela izivakashi e-Asia, ngokuthandwa nangamanani phakathi kwabahambi. Ungaphuthelwa uma uvakashela ezwekazini.
IMinneriya ingenye yamapaki kazwelonke amakhulu kunazo zonke eSri Lanka. Itholakala esifundazweni esisenyakatho-maphakathi nezwe futhi inendawo engama-9000
Ihlathi Lokuzibulala eJapane
Ihlathi Lokuzibulala liyindawo esemithambekeni yeNtaba iFuji, eJapan. Indawo egcwele imfihlakalo lapho abantu bazibulala khona.
Ukubuka iSouth Korea ngezitimela zezivakashi
Bona izitimela ezimbili ezihamba phambili nezibukeka kakhulu eSouth Korea
Amasiko namasiko ase-Indonesia
Sithola amasiko ajwayelekile e-Indonesia. Amaphathi, inkolo, okokugqoka, i-gastronomy nokunye okuningi. Ungaphuthelwa isiko lase-Indonesia.
Thola izindawo ezinhle kakhulu zokujabulela impilo yasebusuku yaseBangkok kanye nemigoqo yama-gay noma amakilabhu wedolobha.
Thailand, ipharadesi lezintelezi eziyinkulungwane ezilahleka e-Asia
IThailand iyindawo ethandwa kakhulu yilabo abafuna ukuzilahlekisela emabhishi aseparadisi nakulabo abafuna ukucabanga ngamasimu angavamile ...
IGulhi isiqhingi esincane esisendaweni engamakhilomitha ambalwa ukusuka enhlokodolobha yezwe iMalile nengxenye eseningizimu yeKaafu Atoll. Izakhamizi ezingaphansi kuka-1000.
AmaHimalaya: uphahla lomhlaba
Sithola amaHimalaya, esinye seziqongo eziphakeme kunazo zonke emhlabeni esise-Asia. Ngabe ufuna ukubona ukuthi yiziphi izimfihlo ezifihla ukuthi ngubani ozivakashelayo?
Irayisi ethosiwe enesitayela saseKorea
Irayisi elithosiwe liyisidlo saseNyakatho Korea esingasenza ekhaya lethu ukunikeza itafula lethu ukuthinta umhlaba wonke.
Ingabe ipanda lithwala uthando noma liyingozi kubantu? Thola zonke izimfihlo zalesi silwane esijwayelekile sase-Asia esisengozini yokuqothulwa.
Isihlalo sikaLipton, iOlimpus yetiye eSri Lanka
Isihlalo sikaLipton, iOlimpus yetiye eSri Lanka. Enye yamasimu etiye abaluleke kakhulu emhlabeni. Abakhiqizi bazo zonke izinhlobo zetiye.
Thola izithombe ezibunjiwe ezinkulu nezithandwa kakhulu eTokyo
Ungafika kanjani eBoracay? I-Airway, ulwandle kanye nomgwaqo
Ucabanga ngokuya eBoracay? Sikutshela izinketho zomoya, ulwandle noma umhlaba okufanele ufike kule ndawo eseparadesi ePhilippines.
Ingubo yendabuko yaseCambodia
Uma uhlela ukuya eCambodia, kuyathakazelisa ukuthi uyazi izingubo nezingubo ezijwayelekile zendawo. Bagqoka kanjani eCambodia? Thola.
Vakashela izintaba ezinhle kakhulu emhlabeni
Vakashela izintaba ezibabazeka kakhulu emhlabeni futhi uzosala uvule umlomo wakho womabili ukuthi ahluke kanjani nobukhosi babanye.
Sikutshela wonke amasiko namasiko omphakathi wamaNdiya. Bahlelwe kanjani abantu bezwe lase-Asia? Thola!
Amaholide namasiko eThailand
Sikutshela ngamasiko aseThailand. Babingelelana kanjani noma imaphi amaqembu agujwa kuleli zwe lase-Asia? Ungaphuthelwa ngoba izokuheha.
ITokyo - iKyoto kuNozomi Super Express Shinkansen
Sikutshela ngohambo lwaseTokyo - Kyoto olugibela isitimela esinezinhlamvu zaseJapan noma iShinkansen, igama elibizwa ngalo lapho.
Amanye amaqiniso athakazelisayo ngeChina: umlando, isiko, ukuma kwezwe nokuheha
Sithola konke mayelana neChina: umlando, isiko, i-geography, okuhehayo namakhona ongeke uphuthelwe ohambweni lwakho oluya ezweni lase-Asia
Amabhishi amahle kakhulu eVietnam
Sikukhombisa amabhishi amahle kakhulu eVietnam ukuze uwavakashele wonke. Amapharadesi esihlabathi nolwandle akulindele e-Asia, uyafuna ukwazi?
IDamu ezintathu leGorges, isimanga samaChina
IDamu leThathu leGorges lingesinye sezimangaliso zanamuhla zobunjiniyela baseChina. Thola izimfihlo zayo, ukuthi isetshenziselwani nokuthi ungayibona kuphi
IPhilippines ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zasolwandle emhlabeni. Sikukhombisa amanye amabhishi amahle kakhulu kuleli ongakwazi ukuwaphuthelwa.
Amathiphu wokuvakashela idolobha laseJapan iHiroshima
ILaos, izwe lezindlovu eziyisigidi
ILaos iyimfihlo enkulu yokugcina yaseNingizimu-mpumalanga Asia ukuyithola. I-ecotourism, ingokomoya kanye namasiko amaningi. Izwe lezindlovu eziyisigidi likulindile.
Thenga ama-pashminas eNdiya
ILotus Building, isakhiwo esimise okwe-lotus eWujin
IMalaysia: ikhodi yokugqoka yezivakashi
ISultanate yaseTerengganu, umbuso omkhulu osentshonalanga neMalaysia, isanda kuphasisa ikhodi entsha yokugqoka evimbela ...
IHiroshima, idolobha lebhomu le-athomu
IHiroshima Memorial Park, ukukhunjulwa kwebhomu le-athomu
I-Peacock Clock eSaint Petersburg
EMnyuziyamu iHermitage eSaint Petersburg kunePeacock Clock enhle endala
Pearl of Qatar, isiqhingi sokunethezeka
IPearl yaseQatar eDoha, indawo yokuhlala kanokusho eyakhiwa esiqhingini sokuzenzela, ngasogwini lwedolobha iWest Bay. I-Doha.
Ithuna likaJesu eliseJapane
EJapan kunomuzi othi unethuna likaJesu
I-Oman: ikhodi yokugqoka yezivakashi
E-Oman benze ingubo yokugqoka ebhekiswe ikakhulukazi kubavakashi
Iziqhingi zaseMiyako, iCaribbean yaseJapan
Amabhishi aseMitako Islands, amabhishi aseJapan, e-Okinawa
Amabhishi amahle kakhulu eChina
Kulesi sihloko senza ukubuyekeza okuncane kwamabhishi amahle kakhulu ongawathola eChina. Uyabazi bonke?
Imoto yekhebula eyingozi kakhulu emhlabeni, eChina
Kunezimoto eziningi zekhebula e-Asia kepha azikho ezifana nalezi ozozithola edolobheni laseYushan, eChina: imoto eyikhebula eyingozi kakhulu emhlabeni.
Mawsynram, lapho lina khona zonke izinsuku zonyaka
imvula, ngaphezu kokubuyela emuva, iyisibusiso: isimo sasemkhathini esigeza izindawo ezithile nge-patina ethile yothando. Uma ungomunye walokho, awukwazi ukuyeka ukuhambela edolobheni laseMawsynram eNdiya, indawo enethwa kunawo wonke emhlabeni enesilinganiso sonyaka esingu-11.871 XNUMX mm ngonyaka.
I-Tour Langwaki Island, ipharadesi laseMalaysia
Isiqhingi saseLangkawi, okuyipharadesi eMalaysia
Imibala yamatekisi aseBangkok
Amatekisi aseBangkok anemibala yonke, uthingo oluhamba emigwaqweni yedolobha ngaphandle kwekhefu
IGreat Banyan, isihlahla esikhulu kunazo zonke eNdiya
Kungenzeka kanjani ukuthi isihlahla sibe ngesinye sezivakashi ezibaluleke kakhulu ezweni? Ukuze wazi impendulo, kufanele uvakashele iGreat Banyan, umkhiwane omkhulu okhule iminyaka engaphezu kwengu-200 eBotanical Garden yedolobha laseHowrah, eduze kwaseCalcutta, eNdiya.
I-Towers of Silence eYazd, e-Iran
Okubizwa ngokuthi yiTowers of Silence edolobheni laseYazd, e-Iran, kuyisiko lesiko elingaphezu kweminyaka engu-3.000 XNUMX eselikhona kuze kube namuhla yize selizonyamalala. Kuze kube muva nje, izidumbu zikamufi zazisabekwa phezu kwazo ukuze zidliwe yilanga namanqe asehlane.
Yimaphi amabhishi amahle kakhulu eTaiwan?
Ungathanda ukuchitha iholide lasehlobo eTaiwan? Isikhathi esihle sokujabulela amabhishi aseTaiwan ...
INanpu Bridge, ibhuloho elibabazekayo eShanghai
Indlela enhle yokubona ukubaluleka kwedolobha eliwele umfula ukukala ubukhulu nobukhulu bamabhuloho alo. Endabeni yeShanghai, bheka nje iNanpu Bridge, ibhuloho elihlaba umxhwele eligudla uMfula iHuangpu.
Udrako owanga ithempeli laseWat Samphran, eThailand
Ngakho konke okuzobonwa edolobheni elihehayo laseBangkok, kuyinto ejwayelekile ukuthi amaphuzu amaningi athakazelisayo anganakwa yizivakashi eziningi, ikakhulukazi lezo ezingavamile ukuvela emihlahlandlela yenhloko-dolobha yaseThailand, njengethempeli elinelukuluku leWat Samphran .
Ihlathi leMonkey eBali
Kufihlwe emahlathini enkabeni yesiqhingi saseBali e-Indonesia isakhiwo sethempeli esisele sinamakhulu eminyaka siphinde siyindawo ebalulekile yemvelo, ikhaya lekholoni lama-macaque anomsila omude angaphezu kwama-500. Sikhuluma ngeMandala Wisata Wenara Wana, ebizwa nangokuthi "ihlathi lezinkawu".
Idolobha lesipoki laseFengdu
Phezulu kweMing Hill, enyakatho yoMfula iYangtze eChina, kukhona uFengdu, "idolobha eliyizipoki." Yindawo engaqondakali eheha izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba, kepha ikakhulukazi izakhamizi ezivela kwezinye izifunda zezwe. Futhi ukuthi le ndawo iyindawo ephelele yokufunda konke mayelana nesiko lamaShayina lezipoki kanye ne-Hereafter.
ISeagaia Ocean Dome, ibhishi elikhulu kunawo wonke elenziwe ngabantu eJapan
Kungumkhuba: amabhishi enziwe ngabantu athola ukuthandwa emhlabeni jikelele. Singakwazi ukugeza kuzo ezindaweni ezihlukile njengeMonaco, Hong Kong, Paris, Berlin, Rotterdam noma iToronto. kodwa ayikho ekhangayo futhi enkulu njengaleyo eseSeagaia Ocean Dome, edolobheni laseMiyazaki, eJapane. Elikhulu kunawo wonke emhlabeni.
Matryoshka, isikhumbuzo sakudala saseRussia
Akucabangeki ukubuya ohambweni oluya eRussia ngaphandle kokuletha i-matryoshka ejwayelekile epotimendeni. Lab 'onodoli bendabuko bayisikhumbuzo esijwayelekile nesipho sokuqala. Ingaphakathi laso eliyize lisebenza ukufihla ukulandelana okungapheli konodoli abancane. Kunomthetho owodwa kuphela: inani lonodoli kumele lihlale lingajwayelekile.
Ibhuloho lokumiswa kweKusma Gyadi eNepal
Eduze kwedolobha laseParbat, enhliziyweni yeNepal isivivinyo sangempela salabo abazonda izindawo eziphakeme: iBusma Gyadi Suspension Bridge (eNepalese, Kushma-Katuwachaupari), ephakama ngamamitha angama-345 ubude emisiwe ngaphezu kwale vacuum
Wazini ngokudla kwaseNyakatho Korea?
INorth Korea inezinhlobonhlobo zeziphakamiso ze-gastronomic ezingamangaza ngempela.
Izitsha ZaseCantonese Cuisine
Kulesi senzakalo sizokhuluma ngokudla kwaseCanton, i-gastronomy evela esifundazweni saseCanton, eningizimu ye ...
Imboni yesikhumba sezinyoka e-Indonesia
Idolobha elincane iKapetakan, entshonalanga nesifundazwe sase-Indonesia iJava, lingesinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu ekukhiqizeni izicathulo, amabhande, izikhwama, izikhwama nezinye izinto ezenziwe ngesikhumba sezinyoka. Lapha izinyoka, ezizondwayo kuyo yonke iplanethi, ziyizinto ezibonakalayo eziluhlaza: isikhumba sisetshenziswa kuso, kepha nenyama namathambo ukwenza amakhambi esintu okwelapha izifo zesikhumba, i-asthma noma ukungabi namandla.
Amabhishi amahle kakhulu eJapan
Amabhishi amahle kakhulu asezindaweni ezishisayo eJapane
I-Imam Ali Mosque yegolide ese-Iraq
Iman Ali Mosque, eNajaf, e-Iraq
IPhang Nga, ibhishi lamaphupho eThailand
Phang Nga, ulwandle eThailand
I-Dura Europos, isinagoge elidala kunawo wonke kanye nesonto emhlabeni
I-Dura Europos, eSyria
Ama-Cherry Trees eJapan
Uma uzohambela eJapan, awukwazi ukuyeka ukuthwebula izimbali ezidumile ze-sakura noma zaseJapane ezihlobisa ukubukeka kwesizwe saseJapan.
Sithole eTokyo 'umgwaqo wama-yakitori'
Uma ungomunye wabahambi abathanda ukuphuma esifundeni sendabuko sabavakashi, suka esikhungweni bese uthola amakhona ...
IHuangluo, China: abesifazane abanezinwele ezinde kunazo zonke emhlabeni
Emhlabeni wonke, abesifazane bakhathazekile ngokuba nezinwele ezinhle, kepha kuzintokazi zakwaYao Huangluo eChina, kumayelana nokunye. Izinwele ziyimpahla yabo eyigugu kakhulu, umcebo abawunakekelayo kukho konke ukuphila kwabo, beziyeka zikhule kuze kube usuku lokufa kwabo.
ILaolongtou: lapho iGreat Wall ihlangana nolwandle
Sesikhulume kaningi lapha ngoDonga Olukhulu lwaseChina: ukunwetshwa kwalo, isimo salo sokongiwa kwemvelo, ukuthi livakashelwa kanjani nokuthi kuphi ... Nokho, asikaze siyisho indawo lapho iphela khona. Ukuze sithole, kufanele siye eShanghaiguan, esifundazweni saseQinhuangdao, cishe amakhilomitha angama-300 empumalanga yedolobha laseBeijing.
INtaba iFuji, eyaziwa nangokuthi iFujisan noma iFujiyama, iphakeme ngamamitha angu-3.376, iyisiqongo esiphakeme kunazo zonke kulo lonke elaseJapane
I-Aokigahara, indawo enhle yokufa
I-Aokigahara ihlathi eliwugqinsi futhi elimnyama elisezansi kweNtaba iFuji elinedumela elibi. EJapan yaziwa ngokuthi "indawo ekahle yokushona" ngenxa yomthengisi othengisa kakhulu kaWataru Tsurumui: "Qedela Incwadi Yokuzibulala". Akungabazeki ukuthi enye yezindawo ezinamakhaza kakhulu ezweni futhi lokho kuheha izivakashi ezimbalwa ezifuna ukwazi.
Ithempeli Eligolide lase-Amritsar, itshe eliyigugu eNdiya
Ithempeli Eligolide LamaSikh, eNdiya
Inyama yezindlovu, isidlo sakudala eThailand
Umkhuba oyingozi: eThailand inyama yezindlovu iba yindawo yokudla yezinkanyezi cishe kuzo zonke izindawo zokudlela ezweni. Kubukeka sengathi njengengulube, indlovu isebenzisa konke okuphelele, kusukela esiqwini kuya ezithweni zobulili. Cha, akuyona ihlaya, okuphambene nalokho, umkhuba osongela ukusinda kohlobo.
Yini okufanele uyibone futhi uyenze eGuangzhou
IGuangzhou (Canton) idolobha lesithathu ngobukhulu eChina kanti eminyakeni yamuva nje selivala iBeijing neShanghai ngenani lezivakashi. Emahoreni amabili nje ukusuka eHong Kong naseMacau, indawo okuyiwa kuyo ngokuya ifunwa futhi ivezwe izivakashi ezihambela e-Asia. Nayi inkomba esheshayo yedolobha
Imibono emibili ngo-Eva Wonyaka Omusha e-Southeast Asia
Namuhla siletha iziphakamiso ezimbili ezihlukile kepha ezinconywe ngokulinganayo zokuchitha usuku olumnandi lonyaka omusha kuzwekazi lase-Asia:
Ikhefi leVampire eGinza, eTokyo
Endaweni yaseGinza eTokyo, kunendawo ewubuciko futhi esabisayo impela, ngisho nedolobha eleqile nezinto eziyinqaba njengenhloko-dolobha yaseJapan. Sikhuluma ngeVampire Café, indawo yokudlela yama-gothic ehlotshiswe ngeziphambano, izingebhezi, ama-cobwebs, amakhandlela anebhokisi lomngcwabo lika-Count Dracula.
UZiggurat wase-Ur-Nammu: Iphiramidi lamaSumeriya e-Iraq
Ubuwazi ukuthi e-Iraq sithole isikhungo senkolo sasendulo? Yebo, yiZiggurat yase-Ur-Nammu, i-ziggurat noma ...
Kuwo wonke umlando, i-cuisine yasePheresiya ibilokhu ibhekwa njengenye yezimnandi kunazo zonke futhi ecwengisiswe kakhulu emhlabeni. Namuhla i-cuisine yase-Iran iyaqhubeka nokuvusa izinkanuko futhi iheha kakhulu ukuvakashela izwe. Kuwo wonke amadolobha namadolobhana amancane ungadlela ezindaweni zokudlela ezinesici ngemali encane. Izindawo zokudlela ezincane nezithokomele zendabuko nezindlu zetiye ezingajwayelekile yizindawo ezinhle zokunambitha izitsha ezinhle kakhulu nokulalela umculo wezwe wendabuko.
Ama-pagodas aphezulu ama-5 amaShayina
Enye yezakhiwo zasempumalanga ezaziwa kakhulu futhi ezaziwa kakhulu emhlabeni yi-pagoda. Yethula kulo lonke elase-Asia, imvelaphi yayo ibuyela emuva ...
Ukuhambela eNdiya nezingane
Izindlovu, amahlosi, ukugibela i-tuc-tuc ... Izingane nazo zingazizwa zithakaselwa i-India ngendlela efanayo nakubantu abadala. Ngemuva kwakho konke, sisezweni laseMowgli. Ukuhamba nezingane uye eNdiya akudingeki ukuthi kube yinkinga uma sazi ukuthi sizihlela kanjani, sikhethe izindawo zethu kahle futhi sibe nokuqonda okuncane. Nayi eminye imibono.
ISakurajima, intaba-mlilo esebenza kakhulu e-Asia
ISakurajima ingenye yezintaba-mlilo ezisebenza kakhulu eJapan futhi mhlawumbe umhlaba kanye nophawu lwedolobha laseKagoshima, izakhamuzi zalo ezilwe iminyaka eyikhulu phakathi kothando nokwesaba intaba yalo enkulu yomlilo. Uma kune-volcano ephilayo emhlabeni, ngokungangabazeki iSakurajima
Ukuvakasha kwamasiko nemvelo e-Asia Ephakathi
Ukuqina kwezokuvakasha kufinyelela ezindaweni ezikude nezintaba zase-Asia Ephakathi, ezihlukaniswe nomhlaba wonke amakhulu eminyaka. Isifunda esiphakathi nendawo sezwekazi, esihlukaniswe izintaba ezinamandla zeHindu Kush kanye neHimalaya. Abahambi abaningi ngokwengeziwe beza kulezi zindawo bathatheka ngamasiko abo ahlukile nangombukwane weMvelo.
Inkabi yakwaKobe: inkomo ephuza ubhiya
Inyama yenkomo yaseKobe ingenye yokudla okufiswa kakhulu eJapan. Ikhwalithi engavamile yenyama yayo itholakala ngenxa yendlela ekhetheke kakhulu yokuguga. Imfihlo yile: lesi silwane sondliwa ngotshwala ehlobo, okubanga isifiso esibi kakhulu kuso.
Iwayini elivela eLebanon, injabulo yeminyaka eyizinkulungwane
Lapho sikhuluma ngezifunda ezinhle zewayini zomhlaba sihlala sicaphuna iFrance, i-Italy, iSpain, njll. Kepha asisoze sacabanga ngeLebanon, kepha nokho le yingxenye yomhlaba lapho iwayini belikhiqizwa isikhathi eside kakhulu.
Ubuwazi ukuthi iPhilippines inogu olude kakhulu emhlabeni? Kulungile, futhi uma uvakashela iManila, ...
Izakhiwo ezintathu ezinde kunazo zonke eHong Kong
IHong Kong ingelinye lamadolobha athakazelisa kakhulu emhlabeni. Ngiyayithanda ngoba akuyona nje eyamabhilidi ...
Ukuthenga okujwayelekile eJordani
Amasokisi waseJordani angumbukwane weqiniso wezinzwa. Isiko lezentengiselwano lase-Arab liyindumezulu futhi lapha kuthatha umbala okhethekile. Kodwa-ke, ukuxoxisana lapha akuvamile njengakwamanye amazwe esifundeni
Izindawo ezinhle kakhulu e-Asia
Ngiyazi ukuthi iYurophu ibalwa kuqala ngokwezindawo eziyintandokazi phakathi kwabahambi. Ngemuva kwayo yonke impucuko yethu ...
Amabhishi ayisithupha ahamba phambili eNdiya
Thola amabhishi ayisithupha ahamba phambili eNdiya, amanye awo aphakathi kwama-6 aphezulu kakhulu emhlabeni. Isihlabathi esihle nenhle kakhulu, zibazi.
Izimakethe ezintantayo zaseBangkok
IBangkok nezimakethe zayo ezintantayo, ezingeza umthamo omuhle wokuziqhenya kwamazwe asempumalanga esithombeni sothando lwemisele
I-Thailand ngesimo sayo, namasiko ayo abelokhu ephawulwe kakhulu yiChina neNdiya. Izithelo zalobu budlelwano ...
Kungenzeka yini ukuya e-Iraq?
Mhlawumbe kwabaningi umqondo wokuhambela e-Iraq ukude impela, lokhu kungenxa yochungechunge lwezigameko ...
Petra, idolobha lamatshe (IIIa)
Sifika esigabeni sesithathu sokuvakasha kwethu ePetra lapho sizokwazi khona i-gastronomy hhayi lokhu kuphela ...
Sazi kahle ukuthi izinkolo ezinkulu zazalelwa ezwenikazi eliphuzi. UbuJuda, ubuKristu nobuSulumane bangubufakazi ...
IGreat Wall yaseChina: Iyini futhi ikuphi?
IGreat Wall yaseChina igama elinikezwe udonga kanye neqoqo lezinqaba ezakhelwe ukuvikela ...
I-Turkmenistan: Izintshisekelo nokuheha izivakashi
ITurkmenistan icishe yambozwa olunye lwazo izingwadule ezinkulu emhlabeni, Ugwadule ...
Izindiza ezihamba phambili e-Asia
Ngaphambi kokuthatha uhambo oluya e-Asia, nokubhuka ithikithi lethu lendiza, kungakuhle ukwazi ukuthi yini ...
Imvamisa lapho sicabanga ukuthatha uhambo oluya e-Asia, ukuvakashela ama-mausoleums, amasiko asendulo, ezokuvakasha ...
Ukubhucungwa ngempikiswano eSouth Korea
Isiko lokuhlikihla laseNingizimu Korea lisho ukuthi abasaji baseNingizimu Korea kumele bazithobe ngokuphelele ...
Ukuthenga eChina: Izimakethe ZaseShanghai (Ingxenye 2)
Siyaqhubeka nokwazi izimakethe eziningi zaseShanghai futhi sithola iShanghai Longhua. Kuyimakethe lapho ungathola khona izingubo ...
Ukuthenga eChina: Izimakethe ZaseShanghai (Ingxenye 1)
Ngubani ongathandi ukuyothenga? Impendulo ngokungangabazeki wonke umuntu. Ngalesi sikhathi ...
Iholide Elihamba Phambili Langkawi: Ungafika Kanjani Futhi Ungakanani Ozoyisebenzisa?
Igama elithi Langkawi lisho ukuthi "umhlaba wezifiso", umqondo obuyela emuva emlandweni we ...
Iziqhingi zaseMaluku e-Indonesia
isithombe sesikweletu: a_rabin Iziqhingi zaseMaluku (ngesi-Indonesian, eMaluku) ziyisifundazwe sase-Indonesia, idolobha laso eliyinhloko i-Ambon, etholakala…
I-China yindawo enhle kakhulu ongayivakashela futhi mhlawumbe ngazo zonke izinto okufanele uzenze, kuzoba ...
Isiko namasiko aseMyanmar
isithombe sesikweletu: Kee-yuen Ukwehluka kwabantu abakha iMyanmar kubanzi kakhulu kangangokuba kuthiwa kukhona amaqembu…
Ithempeli eliyimfihlakalo lefu elimhlophe
Ithempeli Lelifu Elimhlophe, eChina, lisemaphethelweni aseXibianmen, eBeijing. Kuyinto eyodwa…
I-Indonesia nezinhlanga zayo: Konke mayelana neMinangkabau
Iqembu lesizwe laseMinangkabau lingumdabu emazweni asentshonalanga yeSumatra e-Indonesia. Isiko labo liphathelene nabomndeni, ...
Izakhiwo zase-Indonesia: Ayini amaTongkonan?
ITongkonan yindlu yokhokho bendabuko yamaTorajas, eseSulawesi, e-Indonesia. ITongkonan inesimo sesikebhe ...
isikweletu sezithombe: daniel pozo Isiko laseMaldivian liyayibona imithombo ehlukahlukene futhi ukuthuthuka kwayo kuthonywe izinto eziningi….
Uma usunomqondo ojwayelekile weSigcawu saseBangkok, usukulungele ukunquma ukuthi yiziphi izindawo ...
Ungafika kanjani eKrabi? Umzila womoya nomhlaba
Uma unentshisekelo yokuhambela eKrabi futhi ungazi ukuthi ungakwenza kanjani, lapha sikunikeza ngezindlela ezahlukahlukene, ukuze ...
Ukuqoshwa kwe-India, i-vestige universal
isithombe sesikweletu: i-blaiq Isithombe sangaphambi komlando senziwe ngamatshe, ubumba, izinyo lendlovu, ithusi negolide. Esigodini sase ...
Ukuphuza nokudla okuhle kweChiang Rai
Njengoba usuvele uyazi, iChiang Rai yisifundazwe esisenyakatho neThailand, futhi sitholakala ...
Ungafika kanjani eGuilin? Izindiza, izitimela namabhasi
IGuilin idolobha elisenyakatho-ntshonalanga yesifunda esizimele saseGuangxi Zhuang, eChina. Ukufika ku…
Izindawo zokudlela ezi-5 eziphezulu eSingapore
1.- Imitshingo eFort: Le yindawo yokudlela enothando kakhulu futhi eyinkathi yamakoloni. Uzothanda ukwazi ...
Besihlale sisho ukuthi uhambo aluphelele uma singabazi ubusuku bendawo leyo, akunjalo? Ushaye khona…
Namuhla umhlaba wemfashini eThailand ubulokhu ushintsha futhi unentshisekelo yabantu abangaphezu koyedwa….
Ithempeli laseSri Mahamariamman eKuala Lumpur
Kuyiqiniso ukuthi enye yezintelezi nokuheha izivakashi emadolobheni ase-Asia ngamathempeli abo asendulo futhi angaqondakali…
Ucabanga ngokuya eNdiya edumile? Ngaphambi kokucabanga ngendawo yokuhlala, izinkambo nokunye kufanele ...
Kunezindlela ezahlukahlukene zokufika eCambodia. Uma ukhetha ukukwenza ngendiza, kufanele sikuxwayise ukuthi ayikho inkampani yezindiza ...
Ukuhambela eBangkok, inhloko-dolobha yaseThailand
ENingizimu-mpumalanga ye-Asia, elinye lamadolobha engiwathanda kakhulu, uma kungenjalo kakhulu, yiBangkok. Njalo lapho ngihamba ngiyazi ...
Amathiphu wokuvakashela eShanghai ezinsukwini ezimbalwa
Uma ungenaso isikhathi esiningi sokuvakashela eShanghai, ake sithi izinsuku ezimbalwa noma ezintathu, ngizokunikeza ...
I-Saigon yabaqalayo 1: Ukuphuma uyophuza iziphuzo.
ISaigon ibilokhu idume ngempilo yasebusuku enempilo. Futhi ngisho namakhomanisi lapho amguqula waba nguHo ...
Abathungi Abaphambili eBangkok: AmaRajawongse Clothiers
Njengoba sishilo kokunye okuthunyelwe (Ukwenza isudi e-Asia) abahambi abaningi banquma ukwenza isudi noma amahembe ...
Isidlo sakusihlwa se-kaiseki eGion, isifunda se-gheisha saseKyoto
Okuhlangenwe nakho okuthakazelisa kakhulu kulolu hambo bekuyidina lesitayela se-kaiseki eGion, indawo yase…
UMfula iMekong udlula: eTibet, eChina, eBurma, eThailand, eLaos, eCambodia naseVietnam
Ngokuqinisekile uzwile ngoMfula iMekong kumabhayisikobho amaningi. Lo mfula odumile ube yindawo yezimpi eziningi nokushushiswa, ...
Uma ungakafiki e-Asia, iSingapore ingenye yezinketho ezinhle kakhulu ongazenza. Hhayi ngoba ngoba ...
Uhlela uhambo lwakho: 1.- Indiza eya e-Asia.
1.- Kumhambi ozimele, isikhumulo sezindiza sokufika asinandaba. Kuyacaca ukuthi ngemuva kokunquma izinsuku ze ...
Ihlathi lemvula elidala kunawo wonke emhlabeni: iTaman Negara
Akukho okunye futhi okuncane, kuneminyaka engaba yizigidi eziyi-130, kulinganiselwa ukuthi ihlathi lemvula laseTaman Negara, ...
Ukuntywila eKoh Phi-Phi, Thailand
Enye yezinto esizithanda kakhulu ngeNingizimu-mpumalanga ye-Asia ukuthi kulula ukuyihlanganisa ohambweni olufanayo ...